Mogadishu Journal » 2017 » September » 3
Mjournal :-Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in aysan aqbalayn dowlad awood qeybsi ah labo maalmood kadib markii maxkamada sare ee Kenya ay baabi’isay natiijadii doorashadii dhowaan ka dhacday Kenya. Odinga oo meel fagaare ah kula hadlayay taageerayaashiisa...
Mjournal :-General Ismaaciil Saxardiid oo ah Taliyaha qeybta 43-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaliyeed oo la hadlay warbaahinta Dowladda ayaa faah faahin ka bixiyay dagaalkii saakay ka dhacay degaanka Buulo-guduud ee duleedka Koonfureed ee magaalada Kismaayo. Taliyaha ayaa...
Al-Shabab fighters attacked a military base near Somalia’s southern port city of Kismayu early on Sunday, a Somali army officer said, adding that he did not immediately have details of any casualties. The armed group claimed responsibility for the attack and said 26 Somali...
Mjournal :-Shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu amray in aysan warbaahinta la hadli karin ogolaansho la’aan, kaddib warqad ka soo baxday Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Danjire Cali Maxamed Cali. Warqada oo soo baxday dhamaadkii bishii July ayaa waxaa lagu...
Mjournal :-Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku kulmaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, si ay u xoojiyaan heshiiska labada dhinaca horay u gaareen. Kulamada ayaa noqon doona kuwo labo geesood ah oo ka kala dhaca Koofurta iyo waqooyiga magaalada oo...
Al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan
Mjournal :-Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaka aroortii weerar culus ku qaadan saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Buulo Gaduud oo qiyaastii 30KM dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. Weerarka ayaa ku bilowday gaari waxyaabaha...